Ny olana ao amin'ny sehatry ny famatsian-tsakafo Reef Resilience
Ny fomba voalohany ahafahana mamatsy ireo paikady mahatsiravina amin'ny seafood mahantra dia mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny mangarahara, ny tsy fisian'ny traikefa, ary ny fandrisihana mivaivay izay mamporisika ny fomba fanjonoana tsy azo antoka. Na izany aza, tokony voamarika fa ny rafitra mpanangona efa misy dia tsy voatery voavolavola; Fa angamba, izy ireo dia mety ho rafitra momba ny lovan-tsofina izay nahomby tamin'ny fotoana niarahana tamin'ny fikasana hivezivezy vokatra faran'izay mahatsiravina (ary heverina ho tsy azo ovaina) avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa. Na dia azo antoka aza fa ny fisian'ny hosoka ary ny fomba fanao mahatsiravina, ny fihetsik'ireo mpilatsaka an-tsena mpitaingin-tsakafo amina seafood dia mifanohitra amin'ny rafitra misy azy ireo. Tahaka ny mahazatra amin'ny olana sarotra dia zava-dehibe ny manamarika fa ny famahana ny olana amin'ny tsirairay, raha manampy, dia tsy hamorona fisarihana maharitra eo amin'ny sehatra manerantany. Na izany aza, ireo fanamby fototra ireo dia tsy maintsy alefa, indrindra amin'ny ezaka atao mandrindra sy miara-miasa, mba hanodinana ny rafitra manontolo. Ao amin'ny fizarana manaraka, vahaolana vaovao mba hamaliana ireo fanamby ireo.
Famantaran'ny tetikasa any Indonezia. Sary © Jeremy Rude / TNC
Tsy fahampian'ny fisamboaran'ny sambo
Inona izany: Tsy ampy ny taratasy na ny firaketana elektronika momba ny toerana, rehefa, ahoana, ary ny zavatra noraisin'ny sambo tsirairay isaky ny dia. Amin'ny fomba tsara indrindra, ity fampahalalana ity dia hosoratana ao amin'ny ambaratonga lehibe indrindra amin'ny asa fanjonoana, toy ny andiam-pandrefesana amin'ny toerana iray, na ny fiaramanidina manokana, sns. Ho an'ny mpanjono madinika, ary miankina amin'ny fomba fambolena, ny fanangonana tahiry dia mety hahatonga ny fahatsapana faran'izay tsara amin'ny faran'ny fanjonoana, na eo amin'ny toeram-pivarotana. Aiza no misy azy: Any amin'ny fisarihana maro manerana izao tontolo izao, ireo mpanjono dia tsy voatery hitatitra ny tratrany amin'ny governemanta na amin'ny orinasan'ny fikarakarana. Ny firaketana ny fifanakalozana amin'ny mpandray voalohany, raha misy, dia matetika tsy ahitana ny angon-drakitra mahazatra, fa manome fotsiny ny solosaina amin'ny lanjany, vidiny, ary karazana indraindray. Na dia ny fampahalalam-baovao dia voarakarin'ny mpandray voalohany aza, dia matetika izy no mamoy ny teboka fanampiny. Ny tsy fahampian'ny fizarana data dia ny solon'ireo mpamatsy ihany no hanome ny fampahalalana takiana na fangatahan'ireo mpanjifany, na ny lalàna sy fitsipika ao amin'ny governemanta. Raha tsy misy mpanjifany mitaky angon-drakitra fanampiny momba ny fiaviany, dia tsy handany ny loharanony ny mpilalao miditra an-tsokosoko mba hisamborana na hizarana ireo tsipiriany ireo-na dia manana azy ireo aza. Antony ilàna izany: Ny tahirin-tsakafo dia ny fampahalalana manan-danja indrindra amin'ny fitantanana ny harena voajanahary sy ny fametrahana ny faharetana sy ny ara-dalàna amin'ny vokatra iray. Ny tahirin-java-manerantany dia matetika no ny angona azo ampiasaina famaritana ny fahasalaman'ny tahiry, indrindra any amin'ireo firenena izay tsy dia misy loatra ny loharanom-pitantanana governemanta noho ny fanangonana fisian'ny fanangonam-baovao. Ankoatr'izany, ny fampirimana ny orinasa rehetra sy ny orinasa momba ny varotra mpanjifa izay mitaky ny fandefasana seafatra maharitra dia tokony afaka mahazo ny angon-drakitra (sy ny fanamarinana azy io) mba ahazoana antoka fa ny raharaham-barotra dia manohana ny fomba ambaran'ny tompon'andraikitra kokoa.
Fampivoarana ny vokatra mialoha ny famoahana ny data
Inona izany: Raha misy vokatra na vondron'ny vokatra alaina amin'ny alàlan'ny fanangonana tahiry voalohany. Mety misy izany:
Ny famarotana ny vokatra mba hamoahana karazana na karazany sasany amin'ny mpamadika iray. Ny tranga voarakitra amin'izao dingana izao dia tsy mitaky ny fanangonam-bokatra voalohany;
Ny fanesorana ny nofo avy ao amin'ny akorandriaka alohan'ny famaritana na ny fanaovana firaisana dia voafaritra;
Manarona sy mampiditra trondro alohan'ny hamantarana ny karazana.
Aiza no misy azy: Amin'ny fanjonoana sasany, ny fiovan'ny vokatra voalohany dia mitranga amin'ny alàlan'ny boatin-tsambo ho toy ny fomba hanamafisana ny fisamborana ary hampihenana ny lanjany (raha misy ny kôbase) na hanafenana vokatra tsy ara-dalàna (ohatra ny zazalahy). Ny famafazana na ny fisamboarana dia azo atao ihany koa ny dockside amin'ny fandraisana ny receiver voalohany alohan'ny hamindrana ny vokatra any amin'ny toeram-pitsaboana iray bebe kokoa izay ahafantarana misimisy kokoa ny angona. Antony ilàna izany: Ny famadihana vokatra, raha tarihin'ny faniriana lalina indrindra, dia fanapahan-kevitra ara-lojistik. Ohatra, ireo mpanarato dia tsy te-hizaka toerana ao anaty siny kely na ao amin'ireo mpangalatra azy ireo miaraka amin'ny kalsa conch; Noho izany dia esorin'izy ireo ny hena raha mbola any an-dranomasina ary esory ny kiraro eny ambony. Raha tsy misy ireo kofehy, dia tsy azo atao ny mahafantatra ny taonan'ny conch-izay voafaritra amin'ny halavan'ny akorandriaka sy ny hatevin'ny hoditra. Na inona na inona antony manosika azy, dia mety hampihen-danja ny ezaka maharitra eo amin'ny fijinjana karazam-borona manokana, zana-ponenana, na ny sehatra sasany ny fanovana ny vokatra voalohany.
Inona izany: Ny fampifangaroana vokatra avy amin'ny hetsika fanjono isan-karazany amin'ny volavolaina tokana dia manjary sarotra, raha tsy misy tsy azo atao, ny mamaritra mazava tsara ny fiaviany, ny fomba fitahirizana, ny daty ny fijinjana, ny fampitahana lehibe, na ireo angona hafa mifandraika amin'ny asa fanjonoana. Aiza no misy azy: Ny fitrandrahana dia mitranga any am-piandohan'ny varotra mpaninjara - eo amin'ny kitapon'ny sambo, na amin'ny ambaran'ny mpandray feo voalohany. Amin'ny toerana tsy voafetra, ny mpanarato matetika dia mampifandray ny vokatra avy amin'ny hetsika fanjonoana isan-karazany, na dia misaraka lavitra aza ny marika ary mitranga mandritra ny andro maromaro. Toy izany koa, ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra vokatra dia mamokatra vokatra arakaraka ny kalita na ny habe, na aiza na aiza, na aiza na aiza. Raha toa ka mitranga izany karazan-tsakafo izany, ny vokatra avy amin'ny antokon'olona samihafa dia mifangaro ary mihetsiketsika eo amin'ny tsipika ambaratonga en masse. Antony ilàna izany: Ny fikarakarana dia tsy ahafahana manavaka ny vokatra azo avy amin'ny vokatra eny an-tsena, satria very ny fampahalalana mivaingana momba ny trondro. Ny fikambanana dia manohy ny "trondro mistery" manohitra ny fampiroboroboana "trondro voahodina" ho toy ny fitsipika.
Inona izany: Ny fifandraisana eo amin'ny rafitra, ny tena manokana ary ny tsy fifandanjana dia mahazatra eo amin'ny sehatry ny famatsian-tsakafo. Aiza no misy azy: Ny fifandraisana eo amin'ny fifandraisana dia mitranga eo amin'ny sehatry ny famatsiana, fa ny tombontsoa manokana dia ny iray eo amin'ny mpamokatra sy ny mpanome voalohany (mpanelanelana izay matetika koa dia mpanitsy na mpanangona). Antony ilàna izany: Ny famaritana tetikady fandraisana fepetra mifanentana amin'ny fanodinana ireo rojo famatsiana dia miankina amin'ny fahatakarana ny lafiny maha-olona amin'ny fifangaroana. Ny fahafantarana ny mpandray anjara dia mitazona ny fahefana ary ny toetoetran'ireny fifandraisana ireny dia zava-dehibe amin'ny famaritana ny hoe ahoana sy ny fomba entina manentana hevitra mikasika ny fitantanana maharitra amin'ny fiarahamonina na orinasa. Amin'ny toe-javatra maro, ny fifandraisana matanjaka sy mahazatra eo amin'ny mpanjono sy ny mpanelanelana dia midika fa ny tetikady sasany dia mety kokoa noho ny hafa. Ohatra, soso-kevitra iray malaza amin'ny fisian'ny mpanararaotra hampihatra ireo fomba amam-panao maharitra dia midika fa tsy manakalo ny sehatra mpaninjara ary mahazo fidirana mivantana mivantana amin'ny mpivarotra an-tsitrapo manome mpanolotra ho an'ny mpanjono ho vidin'ny loka ho an'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra. Amin'ny toe-javatra sasany dia mety midika fa mandalo ny mpamatsy iray izay efa nanapaka ny mpanjono; Amin'ny toe-javatra hafa dia mety midika izany fa manosika ny mpiray tam-po aminy, namana akaiky, na mpikambana ao amin'ny fiarahamonina-mety ho an'ny olona izay mandoa ny asa fanjonoana na mamita ny fandaniana ara-pahasalaman'ny fianakaviany. Noho izany, ny fahatakarana ny mety ho fiantraikan'ny tsirairay sy ny fifandraisany amin'ny fidirana an-tsehatra manokana na ny fandraisana andraikitra dia manan-danja indrindra, satria ny fampiasana ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fifampiraharahana dia mety ho singa mahomby amin'ny fahombiazana.
Ny mpamboly matetika dia tsy mpandraharaha
Inona izany: Ny mpanjono dia manam-pahaizana amin'ny fanjonoana, saingy mety tsy hanana fahalalana na traikefa ilaina mba hampiroboroboana kokoa (sy maharitra) amin'ny sehatry ny seafood. Aiza no misy azy: Amin'ny orinasa mpamokatra ny varotra mpaninjara. Antony ilàna izany: Maro ireo mpanjono no sahiran-tsaina noho ny fisian'ny mpanarato mahomby sy maharitra, ny androny dia mandany ny zava-drehetra fa manjono. Matetika ny tetikady hanampy ny mpanjono dia manome lanja kokoa ny vokatra misy azy ireo dia mitaky fahaiza-manao amin'ny fanodinana, ny varotra, ny fifampiraharaham-barotra, ny logistics (transport, ny entana entana), ny fitantanana sy ny fitantanana (ohatra ny fitantanana ny vidy, ny lamandy, ny faktiora, sns.) ny fandaminana ny fiarahamonina (amin'ny alalan'ny coops, sectors, fikambanana na rafitra hafa). Ny tetikadin'ny zava-misy ho an'ny fitantanana maharitra dia tsy maintsy manome mpanjono ny tolotra fanampiana ara-barotra ilaina mba hahafahan'izy ireo mifantoka kokoa amin'ny fanovana ny fomba fanjonoana (anisan'izany ny karazana fitaovana vaovao, raha ilaina).
Fanabeazana momba ny kolontsaina
Inona izany: Ireo no fanantenana, fanekena, ary fahatsapana izay mamolavola ny zavatra rehetra izay heverina ho "ankasitrahana" amin'ny fomba fijerin'ny mpanjono ny andraikiny ao amin'ny fiarahamonina. Aiza no misy azy: Amin'ny ankapobeny matetika dia amin'ny endriny roa: ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Antony ilàna izany: Ireo fitsipika ara-kolotsaina dia afaka manazava be dia be momba ny antony manosika na antony mahatonga ny fitondran-tena sasany. Matetika izy ireo no sarotra kokoa ny miova, indrindra raha mifamatotra amin'ny soatoavina lalina izy ireo. Ny fahatakarana ny zavatra inoan'ny finoana sy ny zavatra antenaiki-tapisaka mivantana eo amin'ny fisarihana dia ny fanatanterahana ny tetikady izay mampifanaraka - ary mety hampitombo ny soatoavina, fa tsy manohitra azy ireo. Ireo fanamby telo farany ireo dia tsy mifandray mivantana amin'ny sehatry ny famatsiana, fa mitazona mafy ny fomba ahafahan'ny mpilatsaka an-tsokosoko mamaly ny fandraisana andraikitra maharitra.
Tsy fahampian'ny fanaraha-maso sy fampiharana
Inona izany: Ny lavaka mangirifiry amin'ny fihetsiketsehan'ny governemanta amin'ny mpandray anjara ao amin'ny sehatry ny famatsiana izay manapaka ny fitsipika. Antony ilàna izany: Ny fanatrehana sasany dia mitaky fanovana eo amin'ny fanovana (toy ny fahazoan-dàlana ho an'ny zotra afa-misaraka) izay miankina amin'ny mety fampiharana ho an'ny fahombiazana. Ny tsy fahampian'ny fampiharana-na eo amin'ny rano na ao anatin'ny trano fanatobiana entana-dia manala haingana ny fahatokisan'ireo mpilalao manao sorona mba 'hanao ny marina'. Na dia tsy azo atao aza ny manala ny fihetsika "ratsy" amin'ny fisian'ny fisamboaravoaran-javatra, na dia miaraka amin'ny teknolojia faran'izay malaza indrindra sy ny orinasam-panjakana mahomby indrindra aza, ireo mpanjono sy mpilatsaka an-tsena dia mila fanatanjahan-tena farafahakeliny fa hanohana ny ezaka ataony ny governemanta fanovana mba hanarahana ny fitantanana ny fitantanana ny jono.
Tsy fahampian'ny tahirin-kevitra sy ny fitantanana ny data
Inona izany: Ny tsena maro dia maro no tsy manana loharanom-pahefana hanohanana ny famoriam-bola, ny fitantanana ary ny fandalinana ny angona momba ny jono. Na dia nangonina aza izy, dia tsy misy toerana ara-bakiteny ho an'ity vaovao ity. Antony ilàna izany: Na ny orinasam-pambolena, na fanangonana amin'ny mpanjono, na amin'ny fomba mahaleotena, ny ezaka hanatsarana ny fanangonam-bokatra dia tsy hanatsara ny fisian'ny fisarihana raha tsy misy rafitra ho an'ny fitehirizana, ny fidirana ary ny fanadihadiana. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fisantaran'andraikitra maro momba ny fanatsarana ny fampahalalam-baovao ho an'ny faritra mahantra dia mifantoka amin'ny fisamborana ireo angon-drakitra nefa tsy miraharaha ny filàn'ny rafitra mpanohana azy hanohanana izany ezaka izany. Fitantanam-pitondrana mavesatra ny fitantanana ny Database, mitaky ny fikojakojana, ny fahafaha-mitahiry, ary ny fampivoarana ny zo sy ny fiarovana. Ity farany indrindra dia mitaky fandaminana tsara sy fifanakalozan-kevitra amin'ny mpandray anjara rehetra mba hiantohana ny fampiasana ara-dalàna sy ny fampiasana amin'ny fomba mahomby amin'ny angon-drakitra ho an'ny indostria sy ny tombontsoa azo avy amin'ny jono.
Fifandraisana misy ifandraisany
Inona izany: Na dia heverina ho toy ny sakana samihafa aza ny fanamby voatanisa dia misy ifandraisany amin'ny tena izy. Izy ireo dia manamboatra valan-tserasera izay manohy ny fahatanterahan'ny toe-javatra, tsy mamaly ny mpanjono noho ny fomba amam-pitsaboana, ary manakana ny fitohanan'ny informatika takiana amin'ny trondro voatahiry any amin'ny tsena. Antony ilàna izany: Ny fiezahana hanala sakana iray monja dia mety tsy hitondra fiovana lehibe. Ireo olana dia tsy maintsy alamina miaraka, amin'ny alàlan'ny fomba maro sy ny fividianana ary fandraisana anjara avy amin'ireo mpisehatra amina mpamatsy sy mpandray anjara hafa. Na izany aza, toy ny olana ateraky ny toetra amam-panahy sy ny dinamika, ny fanesorana ireo sakana dia mety hiteraka fisokafan'ny rojom-panomezana ho mpamily manentana ny fitantanana maharitra. Ao amin'ny fizarana manaraka, vahaolana vaovao mba hamaliana ireo fanamby ireo.
Ny fampahalalana ato amin'ity fizarana ity dia natolotry ny Future of Fish. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa Ho avy ny trondro.